March 15, 2022 AdminLeaveaComment on यु’वतीहरुले नुहाउँदा यस्ता कुराहरु सोच्छन् ! पत्याउनु हुन्छ ?
यु’वतीहरुलाई आफू नुहाउदै गर्दा पनि विभिन्न खालको चिन्ताले सताउने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । महिलाले नुहाउदा आफ्नो शरीर र कपालको बारेमा चिन्ता गर्छन् । यस बाहेक उनीहरु महिला बाथरुमभित्र आफैसँग छिल्लिने गरेको समेत अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । केटीहरू अक्सर स’म्बन्धबारे चिन्तित रहन्छन् । उनीहरू सधैं दिगो स’म्बन्धको खोजीमा हुन्छन् ।
त्यति मात्र होइन प्रेमी भएका केटीहरूआफ्नो प्रेमीबारे सोचेर लजाउने उसले गरेका प्र’शंसाहरू सोचेर खुसी समेत गरेको थाहा हुन आएको छ । केटीहरूले नुहाउँदा आफ्नो फिगर, सुन्दरताबारे त चिन्तित हुन्छन नै त्यसका साथै उनीहरूलाई आफूले नुहाउँदा धेरै समय लगाएको र मानिसहरूले के भन्लान् भनेर समेत चिन्तित हुने गर्दछन् । एजेन्सी ।
यो पनि पढ्नुहोस नुहाउने क्रममा हामी प्राय गल्ति गरिरहेका हुन्छौं जसले हाम्रो स्किन तथा कपाल को स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर गरेको हुन्छ । अनुहारको छाला निकै सेन्सेटिभ हुने गर्छ । फोर्सले आएको पानी, अति तातो वा अति चिसो पानीले अनुहार वा आँखालाई हानी पुर्याउँछ । अति तातो वा चिसो पानीले अनुहारको छाला र आँखालाई मात्र नभई कपालको टिस्युजलाई हानी पुर्याउँछ ।
यसै कारण चिल्लो छाला पनि सुक्खा बन्छ । जाडोमा झैँ छाला फुट्ने समस्या हुन सक्छ । नुहाएपछी पुछ्ने तौलिया हामीले बाथरुममै राख्ने गर्नु हुन्न। कतिपय ट्वाइलेटसमेत भएको एटेच बाथरुममा झन् यस्तो तौलिया राख्नै हुन्न । यस्तो अवस्थामा नुहाएपछी सरिर पुछ्ने तौलियामा बिभिन्न ब्याक्टेरिया हुन सक्छन्। एजेन्सी